सशस्त्र प्रहरी बलको शाहसिक कदम : हतियारसहित नेपाली भूमिमा बसेका एसएसबीको पोस्ट हटाइयो — Chetana Online
परासी : पश्चिम नवलपरासीको सीमा क्षेत्रमा रहेको भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको अस्थायी पोष्ट सशस्त्र प्रहरीले हटाएको छ।
सुस्ता गाउँपालिका–५ बलिनगर सीमामा पर्ने दसगजा क्षेत्रको बीच भागमा एसएसबीले अस्थायी पोष्ट निर्माण गरेको समाचार मंगलबार अन्नपूर्ण अनलाईनमा प्रकाशित भएको थियो।
समाचार प्रकाशित लगत्तै पोष्ट हटाउनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हेड क्वाटर नं. २६ ले भारतीय एसएसबीसँग संवाद अघि बढाएको थियो।
लामो समयदेखि अस्थायी पोष्ट निर्माण गरेर एसएसबीहरु नेपाली भूभागमा हतियारसहित चेकजाँच गर्दै आएका थिए। सीमा क्षेत्रका भारतीय एसएसबीका कमाण्डरसँगको संवाद र छलफलपछि शुक्रबार उक्त पोष्ट हटाइएको शसस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गहार्धन राईले बताए।
एसएसबीले दसगजाको बीचभागमा पर्ने गरी कच्ची टहरो बनाएर पोष्ट निर्माण गरेका थिए। उनीहरु पोष्ट अगाडिको नेपाली भूभागमा बसेर हतियारसहित चेकजाँच गर्ने गरेका थिए।
दसगजा मिचेर कुनै पनि देशले संरचना निर्माण गर्नु अन्तराष्ट्रि नियम विपरित रहेको बताएपछि भारतीय पक्षले पोष्ट हटाएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राईले बताए।
यसअघि पनि एसएसबीले जिल्लाका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा पोष्ट निर्माण गर्दै आएकोमा सशस्त्रले स्थानीय स्तरको छलफलबाट हटाउँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्टभन्दा एसएसबीका पोष्ट धेरै छन्।
भारतको उत्तरप्रदेशसँग सीमाना जोडिएको जिल्लाको सीमा क्षेत्र २८ कि.मि. छ। सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको २५ देखि ३० स्थानमा अस्थायी पोष्ट छन्।
शसस्त्र प्रहरीको भने ३ वटा बिओपी (बर्डर आउट पोष्ट) मात्र रहेका छन्। जनशक्ति अभावले नियमित गस्तीमा समस्या आउँदा एसएसबीले दसगजा अतिक्रमण गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
दाङ्ग तिरको नाक क्षेत्रको हालत झन् खराब
भारतसंग सिमा जोडिएको नाका क्षेत्रमा नेपाली पक्षको सिमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर देखिन्छ । भारतीय पक्षले चार/चार किलोमिटरमा सिमा रक्षाको लागि सुरक्षा निकाय खटाउने गरेपनि नेपाली सुरक्षा निकायको अवस्था नाजुक पाइन्छ ।
बाँकी नाकाबाट जतिबेलापनि सहजै एक अर्को देशमा आवतजावत गर्न सकिन्छ । सना कच्ची घर त्यसमा पनि घरले छाएको बल लगाउँदा भत्कने घरमा बसेर नाकामा प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ । बिधुत छैन, सञ्चारसेट चार्ज गर्न सोलारको भरपर्नुपर्छ ।
दाङ जिल्लाको भारतसंग सिमा जोडिएका ३४ वटा खुला सिमाना पर्दछन । भारतीय पक्षले सबै सिमानामा मजवुद सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा नेपाली सुरक्षा निकायको छ वटा नाकामा मात्रैे उपस्थिति देख्न सकिन्छ । यो समाचार गणतन्त्र राष्ट्रीय दैनिकमा दिवाकर पोख्रेलले लेख्नुभएको छ।
जिल्लामा सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रहरी चौकीबाट सिधै सम्पर्क हुदैन, अग्लो डाँडोृ खोज्दै सेट लिएर हिंडनुपर्छ । चार वटा स्थायी र दुईवटा अस्थायी प्रहरी पोष्ट सीमा नाकामा छन् ।
भैसाही, खांग्रा, कोइलाबास र मुसीनाका स्थायी प्रहरी चौकी र डगमारा र सिरीया अस्थायी प्रहरी पोष्ट हुन् । न कुनै बलियो भौतिक संरचना छ, न पर्याप्त जनशक्ति, हतियार, न भरपर्दो सञ्चार सुविधा नै ।
कमजोर सुरक्षा अवस्थाको फाइदा उठाउँदै नाकाक्षेत्रमा गैरकानुनी गतिबिधि पनि हुने गर्दछन । दुइ महिना पहिले मात्रै भौवा नाकाबाट हतियार बनाउने कारखानामै प्रहरीले छापा मारी हतियार बनाउने व्यक्ति र सामान जफत ग¥यो ।
नाका क्षेत्रको नेपाली सुरक्षा व्यवस्थापनको विषयमा राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष श्यामवहादुर रोकाले धेरैपटक सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । सिमा सुरक्षा बल राजमार्गमा गएर बस्ने यहाँ हाम्रो नाका क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था नाजुक हुने अवस्था मिलेको छैन ,उहाँले भन्नुभयो । जनशक्ति कम तर भूगोल ठूलो छ, त्यहि भएर सुरक्षामा हम्मेहम्मे पर्छ, वडाअध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो ।
नागरिक तथा सीमाको सुरक्षामा निकै अप्ठेरो हुने गरेको प्रहरीहरु नै बताउँछन् । सीमाका भैसाही, खांग्रा र कोइलाबास बाहेक अरु प्रहरी चौकीमा सञ्चार सेट समेत छैन । नेपालका सीमकार्डले काम गर्दैन नाकामा ।
नाका क्षेत्रका सुरक्षा निकायले आफ्नो सञ्चारसेट बोकेर अग्लो खोज्दै हिडेपछि मात्रै जिल्लासंग सम्पर्क हुन्छ, जिल्लाबाट सिधै सम्पर्क हुन सक्दैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख बेलवहादुर पाण्डेले नाका क्षेत्रको सुरक्षा निकाय सम्पर्कमा आउन चाहेपछि मात्रै सम्पर्क हुन सक्ने बताउनुभयो । आफ्नै रेडियो सेट छ,तर प्रहरी पोस्ट र चौकीमा काम गर्दैन कुनै सूचना दिन लिन परे माथि डाँडामा आउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रहरीलाई पनि एउटा प्रहरी चौकी देखि अर्को प्रहरी चौकी जान भारतको सडम प्रयोग गर्नुपर्छ नाका क्षेत्रमा । खाद्यान्नको लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । रासन पानी लिन भारतको बजार जान्छौ, एकपटकमा हप्ताभरी पुग्नगरीे ल्याउने गर्दछौ,सबै सुविधा प्रयोग गर्न भारत मै भरपर्नु पर्ने बाध्यता छ,अस्थायी प्रहरी चौकी डगमाराका इन्चार्ज अरत अधिकारीले भन्नुभयो ।
नाकामा जसरी भारतले सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार नेपालको भने कहाली लाग्दो छ । सिमा क्षेत्र सुरक्षाका लागि शसस्त्र प्रहरी कोइलावास र सुनपथरी नाकामा सिमा सुरक्षा चौकी बसेको छ । नाकामा भैसाही, डगमारा, खांग्रा, सिरिया, कोइलावास र मुसीनाकामा नेपाल प्रहरी सिमा र नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिएका छन् ।
दैनिकी चलाउन आबस्यक पर्ने बस्तुहरुको आयातका लागि भारतमा भरपर्नुपर्ने र त्यो सहज नभएको भन्दै नाकाक्षेत्रका नागरिकले २०६५/०६७ मा आन्दोलन नै गर्नुप¥यो । लमही नगरपालिकाको कर्री सामुदायिक वनमा आएर बसेर आन्दोलन गरेपछि बिस्तारै नाका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापन शुरु भएको स्थानीय नाका क्षेत्रका जानकार देवीराम सुनारले बताउनुभयोे ।
पुर्व अर्नाह नाका देखि पश्चिम भौवा मिर्गिया नाका सम्म कुल एक हजार एक सय घरधुरी जहाँ सात हजार जनसंख्या रहेको छ । बन्यजन्तु, काठ एवं जडिबुटी तस्करी सहजै हुन सक्ने भएको भन्दै नाकामा सिमा सुरक्षाका लागि शसस्त्र प्रहरीलाई प्रत्येक नाकामा खटाउनु पर्ने स्थानीय बताउँछन ।
भारतिय सिमा सुरक्षा बलका जवानहरु हतियार सहित नेपालका गाउँहरुमा घुम्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारले उच्च स्तरको बार्ता गर्नु तर्क गर्नुहुन्छ, नपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष चक्रवहादुर खड्का ।
यता शसस्त्र प्ररही ज्वालामाई गढभालुबाङका सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक एस.पी. तुलसी दाहालले भुगोलको समस्याको कारण नाका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापन लाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताउनहुन्छ ।
भु्गोलकै का्रण बस्न सक्ने अवस्था छैन, भौतिक पुर्वाधार छैन,सिमामा सुरक्षा व्यवस्था पुगेको छ भन्ने अवस्थामा हामी पनि छैनौै, दाहालले भन्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार सुविधा भए आफूहरु लाई सिमामा गएर बस्ने गारो नहुने उहाँको भनाइ छ ।